Shut Up uye Sarudza Iwo Makuru Makuru ?! | Martech Zone
Shut Up uye Sarudza Iwo Makuru Makuru ?!
NeChishanu, Nyamavhuvhu 15, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Uyu wakawanda wemubvunzo wekukurukurirana pane kutaura. Chiitiko changu nekublogi ndechekuti kusapindirana ndizvo zvese. Kana vaverengi vako vachitarisira kuve nezvinhu zvitsva zuva nezuva, ivo vanodzokera kune yako saiti zuva nezuva kuti vawane izvo zvemukati. Mubvunzo wakanaka ndewokuti:
Kangani mushanyi achadzokera kune yako webhusaiti kuti atarise izvo zvitsva zvisati zvaitika Mira kudzoka?
Ndanga ndichiita kuyedza munguva pfupi yapfuura. Haisi nzira yesainzi yandakatora, asi pandakanyora blog post pa Starbucks iyo yakagamuchira kutarisisa kwakawanda (A), ndakafunga ku rega itasve kuona zvaizoitika.
Chimwe chinyorwa chinonakidza ndechekuti posvo yaive yakakurumbira kwemaawa angangoita makumi manomwe nemaviri (B) mushure mekunyorwa kwayo. Zvaiita sekutora zuva rekuti vanhu vazeye zvirimo uyezve rimwe zuva kuti vapindure nekunyora nezvazvo pamablog avo. Izvi, zvakare, zvakadzosera traffic kune yangu saiti kwechipiri zuva. Nezuva rechitatu (C), zvakadaro, kutarisisa kwainge kwapera uye bhurogu yakadzokera kumatanho ayo akajairwa evashanyi vezuva nezuva (kusanganisa ma72 RSS Vanyoreri).
Icho chokwadi chekuti blog rakadzokera kune zvakajairika mazinga (kusvika iyo Yakagadziriswa Mune Calculator kutanga) zvinoreva kwandiri kuti iyo Digg or Vakagumburwa traffic, kunyange ichikurudzira, haisiriyo traffic yandiri kutevera. Ava ndivo vechokwadi vafambisi - kutsvaga zvinonakidza zvemukati kunze asi vasingadzokere zvimwe. Ndiri mushure mevanhu vanodzoka - vanhu vanonyorera kuchikafu changu, vanoshanya nguva dzose, uye vanotora chikamu munhaurirano dzandakaisa pano.
Mune chaiwo mamiriro enhau, ndingadai ndakarega buzz ichienderera mberi ndisati ndaikanganisa nepositi nyowani uye nhaurwa nyowani. Ndingadai ndakaramba ndichiedza kuyedza 'kuchovha wave', pamwe kutopfuurira nhaurirano muzvikamu zviviri kana zvitatu zvekuwedzera. Kunyangwe izvo zvingave zvakabatsira kuchengetedza huwandu hwe (B) kwenguva duku vashanyi vakandiwana makumi mana nemasere kusvika makumi manomwe nemaviri maawa mushure mekutumira, ndakafunga kuti ndinofanira kuramba ndichitumira zuva nezuva - zvangu moyo vaverengi (C) vanoramba vachidzokera kublog rangu.
Zviri nyore kuchengetedza vaverengi pane zvazviri kuwana zvitsva. Kusvetuka pane iyo diggwagon kwakafanana nekubva pamarathon kuenda kuchimhanya. Marathon inovaka kuverenga kwepakati, kufamba mushe uye nemaune, kusangana nezvinotarisirwa nevanyori vako vepamoyo. Iyo yekumhanyisa inonetesa yekuita kuti vamwe vakuvhotere, kunyora chinongedzo chakabikwa zvemukati, uye kungoedza kuyera pamusoro pegomo nyowani revaverengi venguva pfupi zuva nezuva. Unogona kuzviita, asi ini handina chokwadi chekuti uchakwanisa kupedzisa mujaho here kana kuti kwete.
Tags: Analyticsnyengerahackedhullabaloopinterest analyticspinterest kusimudzira
Isu vs. Iwe! Wakavharirwa mukati?
3 Matanho Ekudzivirira yako Blog kubva kune Huru, Mafuta Mhosva
Aug 15, 2008 pa 10: 24 AM
Ndofunga warovera chipikiri mumusoro neizvi. Zvingave zvakakodzera kuti midhiya mikuru kana masangano agare pakubudirira asati aenda kune imwe nhanho inotevera, asi kune ega mablogiki, zvine musoro kuomerera pakuburitsa nguva zhinji uye zvine musoro zvinotumirwa kugadzirisa vateereri venguva dzose. Chokwadi kupenya kweapo neapo mupani diggers kana zvigumbuso inzira yakanaka yekuvashandura kuita zvenguva dzose.
Ini ndave neashoma anonyanya kufarirwa zvinyorwa pane yangu blog, asi kutarisisa kwaizogara kuchidzika kusvika kune yakajairwa nhanho mushure mevhiki kana zvakadaro kune yenguva dzose yekushanya + inoshandura nhanho.
Ini ndinofungidzira kunyora zvemukati zvakanangana digg / zvinonaka / kugumburwa mavhiki mashoma ega ega kwakakosha kuti vanhu vatsva vawane yako saiti. Saka, iyo marathon mazuva ese, asi sprint mukupera kwevhiki 🙂
Aug 16, 2008 pa 6: 49 AM
Zvinoshamisa kuonesa pazvinhu zvinochengeta bhurogi/saiti ichienderera mberi. Ndinovimba kukuona iwe pedyo kuThe Bean.
Sep 4, 2008 na5:00 PM
Ndakaona iyi patter chaiyo yeawa makumi mana nemasere kusvika makumi manomwe nemaviri uye ndakaedza kuiwedzera nehunyanzvi hwekudzokera kunzvimbo yakakurumbira asi ndichiri kudyisa zvinyorwa zvine musoro mumutsara kune venguva dzose. Tariro ndeyokuti kudzokororwa kwekukwezva kutsva kuchaita kuti vatsva vagare kwenguva yakareba zvakakwana kuti vaone kunaka kwemari yenguva dzose. Kuverenga kwangu kudiki asi kubva pakutora nzira iyi ndakakura kuverenga kwangu kwepakati (avhareji yemazuva gumi) ingangoita 48% mumwedzi mina yapfuura.